Madaxweyne Bouteflika oo ka baxay Tartanka Doorashada Aljeeriya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Madaxweyne Bouteflika oo ka baxay Tartanka Doorashada Aljeeriya
Madaxweyne Bouteflika oo ka baxay Tartanka Doorashada Aljeeriya
March 12, 2019 - By: Horseed Team
Madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdicasis Bouteflika ayaa Isniintii shalay shaaciyey inuu isaga haray tartanka Doorashada Madaxweynaha ee la qorsheeyey inay dhacdo bisha April, kadib cadaadis xoogan oo uga yimid dhinaca shacabka dalkaasi oo diiday inuu markii 5aad xilka qabto.
Bouteflika ayaa go’aankiisa ku dhawaaqay maalin kadib markii uu dib uga soo noqday safar caafimaad oo uu ku tagay magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
Todobaadyadii lasoo dhaafay ayey shacabka Aljeeriya dhigayeen banaanbaxyo balaaran oo looga soo horjeedo in Madaxweynaha xilka haya 20kii sano ee lasoo dhaafay uu markale xukunka qabto, kadib go’aankii xalay ee Bouteflika ayey shacabka dhigeen dabaal-deg balaaran.
Wuxuu sidoo kale dib u dhigay xiliga doorashada ay dhici lahayd, taasi oo kasii careysiisay shacabka oo weli codsanaya inuu si deg deg ah xilka isaga dego.
Bouteflika oo ah 82 sano jir ayuu cudurka wadnaha ku dhacay sanadkii 2013 xiligaasi oo ay socdeen kacdoonadii dalalka Carabta, wakhtigaa kadib ayuu ku jiray xaalad adag waxaana dhib ku ahaa hadalka iyo socodka, walow taageerayaashiisa ay kula talinayeen inuu markale xilka u tartamo.
Madaxweyne Boutelfika ayaa sidoo kale ku dhawaaqay Afti cusub oo loo qaadi doono dastuurka dalkaasi oo la filayo in la qabto dhamaadka sanadkan, wuxuuna isku shaandheyn ku sameeyey xukuumadiisa isagoo xilkii ka qaaday Wasiirka Kowaad Ahmed Ouyahia oo lagu bedalay Noureddine Bedoui oo horey u ahaa wasiirka Arrimaha gudaha.